Khin Ma Ma Myo's Blog: October 2010
၀ါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်ချိန် အခါသမယသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ယခုလို အချိန်ကာလမျိုးတွင် ရပ်ဝေးမှ လူကြီးသူမများနှင့် ကျေးဇူးရှင် ဆရာ၊ ဆရာမများကို ဖုန်းဖြင့် တနည်း၊ စာဖြင့် တဖုံ ပူဇော်ဂါဝရပြုသည့်အခါ လူကြီးသူမများကလဲ ဆုများ ပြန်ပေးတတ်ကြလေသည်။ ယင်းဆုများတွင် ဘ၀နှင့် ဆန္ဒ တထပ်တည်းကျပါစေ ဆိုသော စကားလုံးလေးများလဲ ပါလာတတ်ပြန်သည်။ ယင်းစကားလုံးလေးများကို ကြားရစဉ်အခါတိုင်း သူမရင်ထဲတွင် အမျိုးအမည် မသိသော ခံစားချက်လေး တရပ်က ပေါ်ထွက်လာစမြဲ။ အသက်သုံးဆယ့်တနှစ်ဆိုသော အချိန်ကာလသို့ တိုင်အောင် လျှောက်လှမ်းခဲ့သော ဘ၀ခရီးတွင် ရှိခဲ့ဖူးသော ဆန္ဒများနှင့် ဖြစ်တည်လာသော ဘ၀တို့ကား တခြားစီ ဖြစ်နေသည်မို့ ယခုအချိန်တွင် ရှိနေသော ဆန္ဒများသည်လည်း တချိန်မှာ ဘ၀နှင့် ထပ်တူကျချင်မှ ကျပေလိမ့်မည်။ သို့ပေမယ့် ဆန္ဒဆိုသည်ကလဲ ပုထုဇဉ် လူသားတယောက်အဖို့ ရှောင်လွဲ၍ မရနိုင်သည်မို့ ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေသမျှ ကာလများတွင်တော့ ဆန္ဒကြောင့် ပေါ်ထွက်လာသော မျှော်လင့်ချက်ကလေးများကို ကိုင်စွဲ၍ ဘ၀ခရီးကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေကြရဦးမည်သာ ဖြစ်လေသည်။
ယခုလို အချိန်အခါသမယတွင် ရင်းနှီးသော အစ်မကြီးတယောက်က ထိုသို့သော ဆုပေးသည့် စကားလုံးများကို ပြောလာချိန်တွင်တော့ သူမ မျိုသိပ်နိုင်စွမ်း မရှိခဲ့။ ဘ၀နှင့် ဆန္ဒများ ယခုအချိန်မှာ တထပ်တည်း မကျပေမယ့်၊ နောင် ဆယ်နှစ်အချိန်အထိ အသက်ရှင်နေသေးလျှင် အသက်လေးဆယ်အတွင်းသို့ ချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်ချိန်တွင်တော့ ပေးသည့် ဆုနှင့် ပြည့်ပါရစေ လို့ ပြန်ပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ တယောက်နှင့် တယောက် ရင်ဖွင့်ဖော်များမို့ အသက်လေးဆယ် အရွယ်မှာ ဘယ်လိုဆန္ဒများ ရှိနေသလဲလို့ အစ်မကြီးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးလေသည်။ သူမကလဲ စိတ်ဆန္ဒစွဲဖြင့် မြင်ယောင်ထားသော သူမလိုချင်သည့် ဘ၀လေးကို အားပါးတရပင် ပြန်ပြောဖြစ်လေသည်။
နောင်ဆယ်နှစ်ဆိုသည့် အချိန်တခုတွင် သူမ၏ တဦးတည်းသော သံယောဇဉ်ကြိုးမျှင်လေး ဖြစ်သည့် သားပေါက်စလေးမှာလဲ အသက် ၁၃၊ ၁၄ အရွယ်သို့ ရောက်နေလောက်ပြီဖြစ်ရာ၊ သားငယ်လေးရဲ့ ပညာရေးကို အလေးအနက်ထားသော သူမသည် international boarding school တခုခုတွင် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား အပ်နှံထားပြီး ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ မိသားစုနှောင်ကြိုး၊ မိသားစု သံယောဇဉ် တို့သည် ဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်များဟု ဆိုနိုင်သော်လဲ သူမကတော့ ထိုနှောင်ကြိုးများ၊ အတ္တများမှ ကင်းလွတ်နေသည့် ဘ၀လေးတခုကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ချင်မိသည်။ ၅၂၈ မေတ္တာနှောင်ကြိုး၊ ၁၅၀၀ မေတ္တာ နှောင်ကြိုးတို့ကြောင့် ပေးဆပ်ခဲ့ရသော အချိန်ကုန်လွန်မှုများနှင့် မျိုသိပ်ခဲ့ရသော ဘ၀ဆန္ဒများစွာ ရှိခဲ့ရပြီဖြစ်ရာ အဆိုပါ နှောင်ကြိုးများကို ဖြတ်တောက်ပြီးသည့် ဘ၀လေးတခုကို ပိုင်ဆိုင်ရရေးသည် နောင်ဆယ်နှစ်တာကာလအတွက် အကြီးမားဆုံးသော ဆန္ဒတခုပင် ဖြစ်တော့သည်။
လူဆိုသည်ကား မွေးဖွားရာ အမိမြေကို သတိရတမ်းတတတ်စမြဲပင်ဖြစ်ရာ သူမ၏ ဘ၀လေးကိုလဲ အမိမြေ တနေရာတွင်ပင် မြှုပ်နှံလိုပါသည်။ လူအများ ပျားပန်းခတ်မျှ ရှုပ်ထွေးနေမှုများ၊ ကားသံများနှင့် ဝေးကွာသည့် နေရာများတွင်ပင် အခြေချ နေထိုင်လေ့ရှိသော သူမအတွက် ရန်ကုန်မြို့ပြင်တနေရာမှ သီးခြား ခြံနေရာ တခုတွင်သာ အခြေချနေလိုစိတ်ရှိလေသည်။ ထိုခြံထဲတွင် ဂုဏ်ပကာသန အရောင်အ၀ါများ မပါရှိသည့် ရိုးရှင်းသော အိမ်လေး တလုံး၊ သူမပိုင်ဆိုင်သော စာအုပ်စာတမ်းများကို သိမ်းဆည်းထားမည့် စာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံလေးတခုနှင့် အသက် ဆယ့်လေးနှစ်မှ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ် မိဘမဲ့ အမျိုးသမီးငယ် ၅၀ ခန့်အား စောင့်ရှောက်ထားနိုင်မည့် အဆောက်အအုံ တခုထားရှိကာ၊ ခြံအနီး တနေရာတွင်တော့ ထုံးဖြူစေတီငယ်လေး တဆူကို တည်ထားချင်ပါသည်။
နံနက် ငါးနာရီတွင် သူမထောင်ထားသော သတင်းစာတိုက်ငယ်လေး တခုသို့ သွား၍ စီမံခန့်ခွဲပြီး၊ စိတ်အာရုံရှိရာ ဘုရားတဆူသို့ သွား၍ တရားဘာဝနာ အားထုတ်ခြင်းများကို ပြုကာ၊ နံနက်စာကိုလဲ ကြုံရာ ကျပန်း စိတ်အလိုရှိရာ ဆိုင်တဆိုင်တွင် စားသောက်လိုပါသည်။ နံနက် ကိုးနာရီတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော သုတေသန အဖွဲ့အစည်းတခုသို့ သွားရောက်၍ လိုသည်များကို ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဆယ့်တနာရီခန့် အချိန်တွင်တော့ စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်းထဲတွင် အချိန်ကုန်လိုပါသည်။ နေ့လည်စာကို ဖြစ်သလို စားသောက်ရင်း နေ့လည်ပိုင်းအချိန်တွင်တော့ တက္ကသိုလ်တခုခုတွင် သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း ပြုလုပ်လိုပါသည်။
ညနေ လေးနာရီခန့်အချိန်တွင်တော့ သူမ နားလည်တတ်ကျွမ်းပြီးဖြစ်သည့် Actuarial Finance နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများသို့ သွားရောက်၍ လိုသည်များကို ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ညနေပိုင်းတွင်တော့ နိုင်ငံရေးပညာ လေ့လာမှုသင်တန်းများ၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းများ အပါအ၀င် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သင်တန်းများ ပို့ချသော training institute တခုကို တည်ထောင်၍ သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ စာဖတ်ဝိုင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း တို့တွင် အချိန်ကုန်လွန်လိုပါသည်။ ညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ညစာစား၍ စောင့်ရှောက်ထားသော အမျိုးသမီးငယ်လေးများ၏ ညစာဖတ်ချိန်ကို ကူစောင့်ပေးရင်း သူတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲလေးများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးလိုပါသည်။ ပြီးလျှင် ထုံးဖြူစေတီလေးသို့ သွားရောက်၍ တရားဘာဝနာ အားထုတ်ပြီး၊ အေးချမ်းလှစွာပင် အိပ်စက်အနားယူမှုကို ပြုလုပ်လိုပါသည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အချိန်လေးများကိုတော့ ကိုယ်ပိုင်စာဖတ်၊ စာရေးချိန်လေးများဟု သတ်မှတ်ပြီး နံနက် မိုးမလင်းခင်ကပင် မြန်မာ့ဟန်၊ မြန်မာ့ဓလေ့လေးများ မပျောက်ကွယ်သေးသော ရွာလေးများဆီသို့ သွားကာ သံဃာတော်များ ဆွမ်းခံကြွနေသည်ကို ကြည်ညိုစွာဖြင့် ဖူးမြော်လိုပါသည်။ ဆွမ်းများ ဆက်ကပ် ပူဇော်လိုပါသည်။ ပြီးလျှင် အေးချမ်းလှသော သဘာ၀၀န်းကျင်လေးများသို့ သွားရောက်ပြီး စာဖတ်၊ စာရေးသည့် အလုပ်များကို ပြုလုပ်လိုပါသည်။ ကျေးရွာများမှ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့သွား၍ ရွာဦးကျောင်း မှန်ဘီဒိုများတွင် သိမ်းဆည်းထားသော စာအုပ်စာတမ်းများကို ဘုန်းတော်ကြီးများထံ ခွင့်တောင်း၍ ဖတ်ရှုလိုပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာထားခဲ့သော ဒဿနိကဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ လူမှုဗေဒ၊ ဘောဂဗေဒ၊ သင်္ချာ၊ လူမှု ရှေးဟောင်းသုတေသန၊ စစ်မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေး၊ လူမှု မနုဿဗေဒနှင့် ဥပဒေ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသန စာတမ်းများတွင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ကိန်းဂဏန်းသင်္ချာ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးစနစ် များနှင့် ပတ်သက်သည့် စာတမ်းများကား အလွန်ပင် ရှားပါးနေသည်ဖြစ်ရာ ထိုပညာရပ်နယ်ပယ်များကို အာရုံထား၍ သုတေသနများ ပြုလုပ်လိုပါသည်။ ကျောက်စာ၊ ပေစာ၊ ပုရပိုက်စာများကိုလဲ နက်နက်နဲနဲ လေ့လာရဦးမည်ဖြစ်ရာ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးများကို ပညာရှာဖွေခြင်း၊ ပညာဖြန့်ဖြူးခြင်းများနှင့်သာ ကုန်လွန်စေလိုပါသည်။ အချိန်အခါအခွင့်သင့်လျှင်တော့ နိုင်ငံတကာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ ညီလာခံများသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲ နိုင်ငံငယ်လေးများမှ သင်ကြားရေးဌာနများတွင် ဧည့်သင်ကြားရေး တာဝန်များ သွားရောက် ထမ်းဆောင်ခြင်းတို့ကိုလဲ ပြုလုပ်လိုပါသည်။ တခါတရံတွင်တော့ မွေးရပ်မြေတောင်ပေါ်မြို့လေးသို့ ခေတ္တသွားရောက်နေထိုင်ရင်း မွေးရပ်မြို့လေးကို ပညာဖြင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်လိုပါသည်။
အသက်လေးဆယ်ကျော်အရွယ် ဘ၀ခရီးလမ်းကို သူမဖြတ်သန်းလိုသော ဆန္ဒလေးများကို အစ်မကြီးအား ပြောပြတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘ၀အချိန်တခုမှာ တောင့်တထားတဲ့ ဆန္ဒလေးတွေနဲ့ တထပ်တည်း ကျပါစေလို့ ပြင်ပြီး ဆုတောင်းပေးမယ်နော် ဟု ဆိုလေသည်။ သူမကလဲ ၀မ်းသာအားရပင် ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုခဲ့ပါသည်။ တချိန်မှာ သူမ ဆန္ဒလေးများ ပြည့်ဝလာမည်လား၊ အနှောင့်အယှက် အတားအဆီးများက ပေါ်ပေါက်လာဦးမည်လား ဆိုသည်ကိုတော့ သူမ မသိပါ။ မည်သို့ဆိုစေ ဆုတောင်းပြည့်မည့် အချိန်ကို မျှော်လင့်စောင့်စားရင်း၊ ဘ၀နှင့် ဆန္ဒ တထပ်တည်း မကိုက်ညီသော ဘ၀ခရီးလမ်းလေးပေါ်မှာလဲ မယိုင်မလဲအောင် ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းနေဆဲ။
ခင်မမမျိုး (၂၉၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀)
လူတယောက်၏ ဘ၀လမ်းကြောင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များတွင်ဖြစ်စေ အတွေးအခေါ်က အဓိကကျလေသည်။ အတွေးအခေါ် ရှင်းလင်းမှသာ လုပ်ဆောင်ရမည့် လမ်းကြောင်းကို သတ်မှတ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ တိကျစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ အတွေးအခေါ် ရှုပ်ထွေးနေလျှင် လမ်းစဉ်များကလည်းေ၀၀ါးနေတတ်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင်လဲ တိကျပြတ်သားမှု မရှိဖြစ်တတ်သည်။ ကြံတိုင်းမမြောက်ပဲ လုပ်တိုင်း မအောင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အချို့က လမ်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ပြီးမှ အတွေးအခေါ်ကို လိုက်လံ စဉ်းစားတတ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှ တရားမင်တယ် ဆိုသော စကားလုံးကား ဤသို့သော အခြေအနေကို ဆိုလိုရင်း ရှိဟန်တူသည်။ လမ်းစဉ်ကို အရင် ရွေးချယ် ထားခြင်း မရှိပဲ လေးစားရင်းစွဲရှိနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း တခု၏ ဦးဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ပါခြင်းဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ အဖွဲ့စွဲ စိတ်ဓာတ် များ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းမှာ အဆိုပါ အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်သည်။
အချို့ကကျတော့ အခြေအနေ တရပ်၏ လှုံဆော်မှုကြောင့် လမ်းစဉ်တခုကို ကိုင်စွဲလာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုလမ်းစဉ်အခြေခံထားသည့် အတွေးအခေါ်ပိုင်းတွင်မူ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိ ဖြစ်နေတတ်သည်။ သာကူးလုပ်တတ်သူများ၊ ခွကျော်စားတတ်သူများ၊ နှစ်ဖက်ချွန်လုပ်တတ်သူများ၊ စမူဆာ လုပ်တတ်သူများမှာ ဤအမျိုးအစားမှ ထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ လမ်းစဉ်တခုကို ကိုင်စွဲပြီးမှ လမ်းဆုံးသည် အထိ ပြီးဆုံးအောင် မလျှောက်သူများမှာလဲ ဤအမျိုးအစားထဲမှ ပေါ်ထွက် လာတတ်သည်။ သို့ရာတွင် လမ်းဆုံးသည်အထိ မလျှောက်သူတိုင်းကိုကား အတွေးအခေါ် မရှိပဲ အခြေအနေ တရပ်၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် လမ်းစဉ်တခုကို ကိုင်စွဲလာသူများဟု တရားသေ သတ်မှတ်၍ ကား မရ။ အတွေးအခေါ်တရပ် ရှိပြီးမှ အဆိုပါအတွေးအခေါ် ဖောက်ပြန်သွားခြင်း (သို့မဟုတ်) လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အခြေအနေများကြောင့် အဆိုပါ အတွေးအခေါ်ကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မည့် ခိုင်မာသော စိတ်ဓာတ် ပျက်ပြယ်သွားခြင်း (သို့မဟုတ်) အတွေးအခေါ်သစ်တရပ်၏ ဆွဲဆောင်ရာသို့ လိုက်ပါသွားခြင်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းတရပ်၏ ဦးဆောင်မှုနောက်သို့ လိုက်ပါသွားခြင်း စသည်များကြောင့်လဲ မူလဆုပ်ကိုင် ထားသော လမ်းစဉ်ကို စွန့်ခွာသွားခြင်းများ ရှိလာတတ်ပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေ လမ်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် အတွေးအခေါ်များ ပါဝင်နေစမြဲပင်ဖြစ်ရာ လမ်းစဉ်တခုကို မရွေးချယ်ခင် အဆိုပါလမ်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အတွေးအခေါ်ကို ကနဦးကြိုတင် လေ့လာသင့်ကြပေသည်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးရာများတွင် ရွေးချယ်စရာ လမ်းစဉ်များ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အများအပြား ရှိနေတတ်ပါသည်။ ထိုလမ်းစဉ်များကို အတွေးအခေါ်များက ဦးဆောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ တခါတရံတွင် ၀ိရောဓိများ၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ၊ ထိပ်တိုက်ထိခတ်နေခြင်းများ၊ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေခြင်းများ၊ သွယ်ဝိုက်ဆက်စပ်နေခြင်းများ ဖြစ်တည်နေတတ်ပါသည်။ ဆက်စပ်နေသော အတွေးအခေါ်များ ပေါင်းစပ်သွားပြီး လမ်းစဉ်သစ်များ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းများ ရှိသကဲ့သို့၊ ထိပ်တိုက်ထိခတ်နေသော သဘောတရားနှင့် အတွေးအခေါ်များကြောင့် ပဋိပက္ခများ၊ စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာခြင်းများလဲ ရှိပါသည်။
ဂရိဘာသာဖြင့် demokratia ၊ အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် demos (people) kratos (rule) စသည့် စကားလုံးသည် ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် democratie သို့ ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ပြီး၊ ဆယ့်ခြောက်ရာစုတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် democracy ဟု ထပ်ဆင့် ပြောင်းလဲသွားပြီး နောက်ပိုင်းကာလတလျှောက် ဒီမိုကရေစီဆိုသော စကားလုံးသည် ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအတွင်းသို့ တစထက်တစ တိုးဝင်လာခဲ့လေသည်။ ဒီမိုကရေစီ ဟူသော အတွေးအခေါ်တွင် မူကွဲများ၊ များစွာ ရှိပါသည်။ classical democracy, developmental republicanism, protective republicanism, protective democracy, legal democracy, developmental democracy, liberal democracy, direct democracy, participatory democracy, cosmopolitan democracy, competitive elitist democracy, social democracy စသည်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ အမျိုးအစားများကလဲ ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် ပတ်သက်သည့် သမိုင်းကြောင်းများ၊ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုအဆင့်များကလဲ ရှုပ်ထွေးနက်နဲလှသည်။
ဤအတွေးအခေါ်နှင့် လမ်းစဉ် ပေါ်ထွက်လာသည်နှင့် ကနဦး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု (Initial Transition) အတွေးအခေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပေါ်ထွက်လာသော နှစ်နှစ်ဆယ်ကြာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုးထားခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းများနှင့် ထိပ်တိုက် ထိခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ် လာပါတော့သည်။ Initial Transition ဆိုသည်ကား ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံများမှ ဦးဆောင်၍ ဖြစ်စေ၊ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစနစ်ကို လိုလားလာသည့် အာဏာရှင်များမှ ဦးဆောင်၍ ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ဦးဆောင်၍ ဖြစ်စေ၊ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံများနှင့် အာဏာရှင်များ ပူးပေါင်း၍ ဖြစ်စေ၊ ကြားဖြတ်အစိုးရ (interim government) များ ဖွဲ့စည်း၍ democratic consolidation ပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားစေမည့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုများကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အချို့က ဤလမ်းကြောင်းများကို revolution လမ်းစဉ်ဟု ခေါ်ဝေါ် သမုတ်ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် တော်လှန်ရေး (revolution) ဆိုသည်ကား အလွန်တရာပင် နက်နဲသိမ်မွေ့လှသော အကြောင်းအရာ တခုဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းကိုယ်တိုင်ကပင် ဒီမိုကရေစီ ဆိုသော အတွေးအခေါ်ကြီး တရပ်ကဲ့သို့သော အတွေးအခေါ်ကြီး တရပ်ဖြစ်လေရာ ဒီမိုကရေစီရေးရာ တစိတ်တပိုင်း အတွေးအခေါ် လေးတခုဖြစ်သည့် Initial Transition အတွေးအခေါ်ဖြင့် မရောထွေးမိစေရန် သတိပြုစေလိုပါသည်။ Initial Transition အတွေးအခေါ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းလေးခုကို ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
Initial transition ဖြစ်လာစေရန်အတွက် အရေးကြီးဆုံးမှာ ကြားဖြတ်အစိုးရပင်ဖြစ်လေသည်။ ကနဦးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်၏ အဓိကသော့ချက်မှာ interim period တွင် မည်သူများက အုပ်ချုပ်၍ အာဏာကို မည်သို့ခွဲဝေသုံးစွဲမည်နည်းဆိုသည့် အချက်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထိုအချက်ကို သေချာစွာဖော်ထုတ်ပြီးမှသာ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု လမ်းကြောင်းမှာ တည့်တည့် မတ်မတ်နှင့် ထိထိရောက်ရောက်ရှိသည်။
နှစ်ဆယ်ရာစုနှောင်းပိုင်း ကနဦးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်များအား လေ့လာ၍ ပညာရှင် Shain နှင့် Lintz ဆိုသူတို့က အဆိုပါပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ ပုံစံလေးမျိုးကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
လူထုတိုက်ပွဲပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအသွင်ဖြင့်ဖြစ်စေ အာဏာရှင် အစိုးရအား ဖြုတ်ချတော်လှန်၍ ကြားဖြတ်အစိုးရအဖြစ်ကြေငြာကာ၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အချိန်တိုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသည့် အစိုးရတရပ် ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်အစိုးရ၏ ဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ အာဏာသက်ရောက်မှုကို total rejections လုပ်ရမည်ဖြစ်၍ အသွင်ကူးစဉ်ကာလတွင် လူထုအပေါ်၌ တာဝန်ခံမှုရှိရမည်။ တာဝန်ယူရမည်။ (၁၉၇၄)ခုနှစ်မှ (၁၉၇၆)ခုနှစ် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ကနဦးဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်သည် ဤပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော ပြောင်းလဲမှုကို လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ပါက အတိုက်အခံအုပ်စုများ စုစည်းကျစ်လစ်မှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဥာဏ်အမြော်အမြင်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်မှုမှန်ကန်ရန် လိုအပ်သည်။ အချိန်အခါကို မှန်မှန်ကန်ကန် တွက်ချက်တတ်ရန် လိုအပ်သည်။ လူထုစည်းရုံးရေး ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြုတ်ကျသွားသော အာဏာရှင်များမှ ပုန်ကန်ခြားနားမှု ရှိလာနိုင်သည် ဖြစ်သဖြင့် အချိန်မှီထိန်းကွပ်နိုင်ရန် စစ်ရေးသတိ၊ နိုင်ငံရေးသတိရှိရန်လိုအပ်သည်။ မူလအာဏာရှင်သည် စစ်အာဏာရှင်ဖြစ်ပါက လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ ပြန့်ကျဲသွားနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ အင်အားစုများကို ပြန်လည်စုစည်း၍ နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်သော ကျစ်လျစ်သည့် တပ်မတော်တရပ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များတွင် အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ (၁၉၈၈) လူထုအရေးတော်ပုံကြီးသည် ဤသို့သော ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းကို ဦးတည်ခဲ့သော်လည်း အားနည်းချက်အချို့ကြောင့် အသက်သွေးချွေးများရင်းပြီးမှ ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်နှင့် မတန်စွာပင် အောင်ပွဲနှင့် လွဲခဲ့ရသည်။ သမိုင်းသင်ခန်းစာ ယူတတ်ရန်လိုပေသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ မှားနေသည်ဆိုလျှင်တော့ မှားသူများ၏ အသုံးမကျမှုပင် ဖြစ်ပေတော့မည်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာကား ထိုပြောင်းလဲမှုကို ဦးတည်သည်ဆိုပါက လူထုတိုက်ပွဲနှင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လမ်းကြောင်းတခုခုကိုဖြစ်စေ၊ နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်၍ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်ရမည်။ စုစည်းမှုအားများ၏ လားရာသည် ထိုပြောင်းလဲမှုကိုသာ ဦးတည်ထွက်သွားရမည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့် သည်များကို “ ဖြစ်လာရင်လုပ်ဖို့နည်းရှိပါတယ်“ ဆိုသော မီဒီယာကြားကောင်းရုံ စကားလုံးများ ပြောနေခြင်းဖြင့် မဟုတ်ပဲ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ထားရမည်။ ခင်းစရာလမ်းကြောင်းကို ခင်းကျင်းထားရမည်။ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွက်ထားရမည်။
ထိုပြောင်းလဲမှုမျိုးကို ဦးတည်ပါက အာဏာရှင်ဘက်မှ ဘက်ပြောင်းလာသူများရှိလာစေရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု အားကောင်းရမည်။ ထိုစည်းရုံးရေးစွမ်းရည်တွင်လည်း လျှို့ဝှက်နိုင်မှု စွမ်းရည်ပါ လိုအပ်သည်။ မည်သူနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အတိုက်အခံများမှ nominate လုပ်နေသည်ကို အာဏာရှင်ဘက်သို့ သတင်းပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ။ မဟုတ်လျှင် ပွဲမပြီးခင် အချိန်မှာပင် အတိုက်အခံနှင့် ပူးပေါင်းချင်သူများ လုပ်ကြံခံလိုက်ရခြင်း၊ အဖမ်းခံလိုက်ရခြင်း၊ ထိုသူမှ စိတ်ပြောင်းသွားခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ လုံခြုံရေးသည် အရေးပါလှသည်။ ထိုသူများနှင့် အချိတ်အဆက်ရှိ ထားပြီးမှသာ လူထုတိုက်ပွဲကို ပုံစံဖော်ရမည်။ လူထုတိုက်ပွဲအချိန်တွင်မှ ပေါ်လာလိမ့်မည်ဆိုပြီး စောင့်စားခြင်း၊ လိုက်လံစည်းရုံးခြင်းများသည် မိမိ၏အင်အားကို ဖြုန်းတီးလိုက်သကဲ့သို့ပင်ရှိသည်။ မည်သို့မျှအကျိုးမထူးပါ။ ရန်သူ့ထက် ခြေတလှမ်းနောက်ကျနေသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးခေါ်ခြင်း သည်လည်း ဤပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပင်ရှိသည်။ သို့ပေမယ့် ထိုသို့ခေါ်ချိန်သည် နှစ်ဘက်ဘက်မျှနေသည့် အချိန်မျိုးတွင်သာ ဖြစ်သင့်သည်။ ပိုလန်နိုင်ငံတွင် ထိုပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပေါ်တက်သွားနိုင်ခဲ့သည်က ပိုလန်နိုင်ငံ people power movement အားကောင်း၍ဖြစ်သည်။
အချို့သောအခြေအနေများတွင် အာဏာရှင်အစိုးရကိုယ်တိုင်မှ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးယိုယွင်းမှုကို မည်သို့မျှမထိန်းနိုင်တော့၍ဖြစ်စေ၊ အုပ်စိုးသူများအချင်းချင်းသဘောထား ကွဲလွဲမှုကြောင့် ဖြစ်စေ၊ အတိုက်အခံများ၏ ခြိမ်းချောက်နိုင်စွမ်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဆက်လက်ထိန်းထားလျှင် တိုင်းပြည်တခုလုံး ဖရိုဖရဲဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကနဦးဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်ကို စတင်လိုက်ရသည်များရှိသည်။ တောင်အာဖရိကဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်သည် ထိုသို့သောပြောင်းလဲမှုနှင့် စတင်ခဲ့သည်။ incumbent de Klerk government သည် အိမ်စောင့်အစိုးရအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၉၃) စက်တင်ဘာတွင်မှ power-sharing coalition အနေဖြင့်ပြောင်းလဲကာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေရန်အတွက် ထိရောက်သောနိုင်ငံတကာဖိအားမှာ အရေးပါလှသည်။ ထိရောက်သောဟူသော စကားလုံးကို ဆိုထားပါသည်။ မစို့မပို့ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်၊ ရှေ့ကဖုံးနောက်ကပေါ် နိုင်ငံတကာဖိအားကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ထက်ပို၍ အရေးကြီးသည်ကား လူထုအားပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူထုအားသည် စုစုစည်းစည်းပြတ်ပြတ်သားသားရှိနေရပါမည်။ အာဏာရှင်တို့အား မပြောင်းလဲလျှင် လုံးဝမရနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်အောင် တွန်းပို့ထားနိုင်ရပါမည်။
အကယ်၍ အာဏာခွဲဝေသုံးစွဲသည့် ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖြစ်လာနိုင်ချေများ လုံးဝမရှိသည့်အခါ (သိုမဟုတ်) နှစ်ဘက်စလုံးတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ ကြမ်းကြုတ်သော ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် တဦးပေါ်တဦးယုံကြည်မှု လုံးဝဥဿုံကင်းမဲ့နေသည့်အခါ (သို့) နှစ်ဘက်စလုံးမည်သူမျှ အောင်ပွဲရတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း သေချာလာသည့်အခါတွင် ကုလသမဂ္ဂကြီးကြပ်မှုဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြားဖြတ်အစိုးရများကို ဖွဲ့စည်းရလေသည်။ နာမီးဘီးယား (၁၉၈၉-၁၉၉၀)နှင့် ကမ်ဘောဒီးယား (၁၉၈၃-၉၃) အခြေအနေများသည် အဆိုပါပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်၏ ဥပမာများပင်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များတိုင်း အောင်မြင်သည်ကား မဟုတ်ပါ။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းကာလများအခြေအနေသည် မအောင်မြင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြားဖြတ်အစိုးရကနဦး ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ ထို့အပြင် အခြားအရေးကြီးသော အချက်မှာကား သူတပါးနှာခေါင်းဖြင့် အသက်ရှူသူများသည် ကိုယ့်နှာခေါင်းဖြင့် အသက်ရှူရန် ခဲယဉ်းသည့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်များပင်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ဆိုစေ ထိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ဦးတည်သည်ဆိုလျှင်ကား Humanitarian intervention ဖြစ်လာစေရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည်။ သတိပြုရန်အချက်ကား ထိုဖြစ်စဉ်စတင်ရန် အချိန်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတတ်သည်။ ဖြစ်လာပြီးလျှင်လည်း နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ အလွန်ပင် ကြီးမားသည်။ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ ပန်းတိုင်ဖြစ်သော democratic consolidation ဖြစ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲသည်။ Long-term effects များပြားသည်။ autonomous development တည်ဆောက်ရန် political and economic challenges များသည်။ ထို costs များကို benefits များဖြင့် weighted လုပ်ကြည့်ပြီး benefits က costs ထက် exceed ဖြစ်မှသာ ထိုလမ်းကြောင်းကို ဦးတည်သင့်သည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ထူးခြားသော အချက်တခုမှာကား ၁၉၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးနောက်ပိုင်းကာလ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည့် အနှစ်နှစ်ဆယ်ခရီးတွင် အတိုက်အခံများ အားလုံးသည် ကနဦးဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်စတင်ရန် အထက်တွင်ဖော်ပြကဲ့သို့ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာကို ခုန်ပြန်ကျော်လွှား အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးသားပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိရောက်မှုရသင့်သလောက် မရခဲ့သည့်အချက်မှာကား မည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုမှ တစိုက်မတ်မတ် ဦးတည်ခြင်းမရှိပဲ ဟိုကွေ့ဟိုတက်နှင့် လှော်၊ ဒီကွေ့ဒီတက်နှင့် လှော်နေကြခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ လှိုင်းထန်လှသော ပင်လယ်ပြင်မှ ဒီမိုကရေစီ လှေငယ်ကား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆီ ရောက်လိုက်၊ နိုင်ငံတကာဖိအားဆီ ရောက်လိုက်၊ လူထုတိုက်ပွဲဆီ ရောက်လိုက်၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆီရောက်လိုက်၊ ယူအင်ဆီရောက်လိုက်၊ အမေရိကန်ဆီရောက်လိုက်၊ အာဆီယံဆီရောက်လိုက်၊ Humanitarian Intervention ဆီရောက်လိုက်၊ တပ်မတော်အားခွဲ၍ မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်များ ပြည်သူနှင့်ပူးပေါင်းရေးဆီ ရောက်လိုက်ဖြစ်ကာ ပင်လယ်ပြင်ထဲတွင် ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်လည်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်လာပါတော့သည်။
ပို၍ ဆိုးသည့်အချက်မှာကား Initial Transition အတွေးအခေါ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် လမ်းကြောင်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နေသော်လည်း အဆိုပါအတွေးအခေါ်၏ အရေးကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်သည့် ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ရေတိုရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်က ပျောက်ကွယ်နေခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်ဆောင်သည့် တောင်းဆိုချက်များ ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာသည် မေရီချက်ပလင်း ဆွံ့အနားမကြားကျောင်း အသွင်သို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ (သို့မဟုတ်) ခါးပိုက်နှိုက်များ နယ်လုသည့် အသွင်သို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်လာလေတော့သည်။
ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်ဆောင်သည့် အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွက်လာရေးဆိုသော အခြေခံ ပန်းတိုင်ကို လက်ခံရုံနှင့် ပြီးသေးသည်ကား မဟုတ်ပဲ ဦးတည်သော ကြားဖြတ်အစိုးရအသွင်ပေါ်မူတည်၍ ပိုမိုအာရုံစိုက်လုပ်ရမည့် လမ်းကြောင်းများ၊ လျှော့ရမည့် လမ်းကြောင်းများလည်း ရှိလာတတ်သည်။ ဥပမာ- လူထုတိုက်ပွဲနှင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကို အာရုံစိုက်သည်ဆိုလျှင် တော်လှန်ရေးကို လူထုနှင့် တသားတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါမည်။ ပြည်သူအများအား ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ် ဖြစ်လာစေရန် တွန်းအားပေးရပါမည်။ မျှော်တော်ယောင်ဖြစ်အောင် အခုပဲ နိုင်ငံတကာ ၀င်လာတော့မည်ဆိုလိုက်၊ အခုပဲ လူထုနည်းနဲ့မှ အောင်မြင်တော့မည်ဆိုလိုက် လုပ်နေခြင်းမှာ တိုက်ပွဲအတွင်း တွေဝေမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အခြားသော အတွေးအခေါ် တခုဖြစ်သည့် Political liberalization သို့ ပြောင်းလဲ လက်ခံကျင့်သုံးသူများက Initial Transition အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်မှာ အနှစ်နှစ်ဆယ် ကျော်လာပြီး ထူးခြားမှု မရှိတော့၍ (၀ါ) Initial Transition အတွေးအခေါ်မှ ဦးဆောင်ထားသော လမ်းကြောင်းများသည် အောင်မြင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့၍ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲသွားခြင်းဟု ဆိုတတ်ကြပါသည်။ သို့ပေမယ့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေး အနှစ်နှစ်ဆယ်ခရီးတွင် Initial Transition အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်ခဲ့သည် ဟူ၍ကား တပ်အပ်သေချာ ပြောဆို၍ မရပါ။ Initial Transition အတွေးအခေါ်၏ လမ်းကြောင်းများဖြစ်သော လူထုတိုက်ပွဲ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ နိုင်ငံတကာဖိအားပေးရေး စသည်တို့ကို ကိုင်စွဲခဲ့ကြသော်လည်း အဆိုပါအတွေးအခေါ်၏ ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာရေးကို ဦးတည်ခြင်း မရှိခဲ့ကြပါ။
ရေတိုပန်းတိုင်ရောက်ပြီးမှ ရေရှည်ပန်းတိုင်သို့ သွားရသည့် လမ်းကြောင်းပေါ်မှ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စသည်တို့ကို ဦးတည်ရင်း အချိန်ကုန် ခဲ့ကြသည်က များပါသည်။ ဆယ်တန်းကျောင်းသားက တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ် စာများကိုပဲ ဖတ်နေသည့်အခါ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲလဲ မအောင်နိုင်၊ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့လဲ မရပဲ ကန့်လန့်ကန့်လန့် ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေမျိုးသို့ ရောက်နေခြင်းသာ ဖြစ်ရာ Initial Transition အတွေးအခေါ် (သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်စနစ်အား ဖြိုချ ခြင်း (authoritarian breakdown) အတွေးအခေါ်မှာ လုံးဝ ကျဆင်းသွားပြီဟုကား မည်သူမျှ တပ်အပ်သေချာ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိ။ အင်အားများစုစည်းပြီး၊ လူထုနှင့်အတူ လက်တွဲ၍ ရေတိုပန်းတိုင်ကို ဦးတည်နိုင်သည့် အချိန်တွင် အောင်မြင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
အလားတူပင် အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ civil liberties များ ဖန်တီးခြင်း၊ ဖိနှိပ်မှု ဖြေလျှော့ခြင်းများဖြင့် စတင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် Political liberalization အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့် လမ်းကြောင်းများမှာ အောင်မြင်မည်၊ ကျဆုံးမည်ကိုလည်း မည်သူမျှ တပ်အပ်သေချာ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိ။ အောင်မြင်ပြီး democratic consolidation ပန်းတိုင်သို့ ရောက်သွားသည့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ် သက်သေသာဓက များရှိသကဲ့သို့၊ လမ်းတ၀က်မှာတင် partial democracy အဖြစ် ကန့်လန့်ဖြစ်နေသည် များလဲ ရှိပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အာဏာရှင်တို့ ဘက်မှ သော်လည်းကောင်း၊ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှသော် လည်းကောင်း အရေးမလှသဖြင့် liberalization ကို abort လုပ်လိုက်ပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကို အသက်ပြန်သွင်းသွား သည်များရှိသကဲ့သို့၊ တပိုင်းတစ အခြေအနေကျမှ အာဏာရှင်တို့စိတ်ပြောင်းကာ အာဏာပြန်သိမ်းသွား သည်လဲ ရှိပါသည်။
(၁) Civil Society ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ
political liberalization အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲ၍ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ သွားရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် civil society ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အလွန် အရေးပါလှသည်။ နိုင်ငံတော်မှ ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှု ကင်းရှင်းသည့် အစုအဖွဲ့များ၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပညာတတ်လူပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော active civil society ရှင်သန်လာရေးသည် အရေးကြီးလှသော လိုအပ်ချက်တရပ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဒီမိုကရေစီ စံများကို နားလည်ကျင့်သုံးလာစေရေး၊ ကွဲပြားခြားနားမှုများအကြားမှ ညီညွတ်မှုကို နားလည်လက်ခံလာစေရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ရှိလာစေရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက် ကြိုးကိုင် ချယ်လှယ်မှုများနှင့် တတ်နိုင်သမျှ ကင်းရှင်းရမည် ဖြစ်လေသည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံတော်၏ ပါဝါချိန်ခွင်လျှာကို တဘက်တလမ်းမှ ထိန်းကျောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအား နိုင်ငံတော်မှ ထိန်းချုပ်ထားမှုကို အားပျော့စေမည် ဖြစ်သည်။ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (အန်ဂျီအို) များသည် state နှင့် society တို့ အကြားတွင် buffer zone အဖြစ် ရပ်တည်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
political liberalization ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် နိုင်ငံအများစုတွင် civil society အဖွဲ့ အများစုကို အာဏာရှင်တို့က ကြိုတင်ဖွဲ့စည်း ထိန်းချုပ်ထားသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် civil society အားကောင်းလာစေရန် ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍများမှ ထိုးဖောက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ပုံမှန် စောင့်ကြည့်လေ့ရှိပြီး၊ အဆိုပါ အဖွဲ့များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် အာဏာရှင်တို့နှင့် ကြိုးကိုင်အဖွဲ့များအား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လာမည့် အခြေအနေရှိမရှိကို အကဲဖြတ်လေ့ရှိသည်။ အာဏာရှင်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ၍ နိုင်ငံတကာရေးရာတွင် international legitimacy ရစေရန် ကြိုးပမ်းထားသော ကြိုးကိုင်အစိုးရများ၏ ရပ်တည်မှုကို ထိခိုက်လာနိုင်သည်ဟု ယူဆပါက public space ကို ပြန်လည်ကန့်သတ်သည်။ လိုအပ်လာပါက အမျိုးသားလုံခြုံရေး (national security concerns) ကို အကြောင်းပြ၍ civil society ကို ဖိနှိပ်ရန်နှင့် အာဏာပြန်သိမ်းနိုင်ရန် ဥပဒေများ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အာဏာရှင်တို့၏ political liberalization ကို အခွင့်အရေးဟု သတ်မှတ်၍ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ အရောက်သွားရန် ကြိုးပမ်းလိုသူများသည် အဆိုပါ obstacles များကို မည်သို့ ကျော်လွှားမည်နည်းဟူသော လမ်းစဉ်များကို စဉ်းစားထားကြရန် လိုအပ်သည်။
(၂) နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ
နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်စနစ် တည်တံ့ခိုင်မြဲနေရခြင်း အကြောင်းတရား များတွင် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များလည်း ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ကွဲပြားခြားနားပြီး၊ အာဏာရှင်ဆန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းသဏ္ဍာန် ဖြစ်တည်နေပါက ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရှင်သန်ခိုင်မာရေးကို အတားအဆီး ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုကို ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် "patrimonialism" ဆိုသော သဘောတရားက လွှမ်းမိုးထားပါသည်။
"patrimonialism" ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည် အလုပ်အတူ တွဲလုပ်ရမည့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ငယ်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၀န်ထမ်းများကို သူတို့နှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းမှ မိသားစုဝင်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သစ္စာရှိသူဟု ယူဆထားသူ များကိုသာ ရွေးချယ်တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်သာမက အတိုက်အခံတို့၏ နိုင်ငံရေး အ၀န်းအ၀ိုင်းတွင်ပါ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ကြသည့်အခါ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အနီးတွင် ရှိနေသူများသည် လိုအပ်လျှင် ခေါင်းဆောင်များကို ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ ပေးနိုင်မည့် အရည်အချင်းရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ မဟုတ်ပဲ ခေါင်းဆောင်များ အလိုကျ ခေါင်းညိမ့်လက်ခံပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှု လုပ်နေသူများသာ ရှိလာသည်။
နိုင်ငံရေးရာများတွင် အရည်အသွေးက အဓိကမကျပဲ မည်သူ့သားသမီး၊ မည်သူ့ဆွေမျိုးသားချင်း ဆိုသည်က အရေးပါလာသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်သူများကသာ များပြီး၊ ဝေဖန် ပိုင်းခြားဥာဏ်ဖြင့် သတိပေးနိုင်သူများက အနီးတွင် မရှိသည့်အခါ ခေါင်းဆောင်များ၏ ငါတကော ကောကာ လုပ်ဆောင်မှုများ ပေါ်ထွက်လာတတ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်များပင်ဖြစ်စေကာမူ ဤသဘောတရား၏ လွှမ်းမိုးမှုများကို ခံရပါက အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူမှုများ ရှိလာတတ်သည်။ "patrimonialism" သဘောတရား လွှမ်းမိုးခံရသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းနှင့် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းမှာ ယှဉ်တွဲနေတတ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနှင့် တက်လမ်းရှာဖွေခြင်းကို အားပေးလေ့မရှိ။ နိုင်ငံရေးအရ အခွင့်အလမ်း ရှိနေသော အုပ်ချုပ်သူများ၏ အသိုင်းအ၀ိုင်းများအား မှီခိုမှုများကို အားပေးလေ့ရှိသည်။ ဥပမာ- စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်လျှင် နိုင်ငံရေးအခွင့်အာဏာရှိနေသော စစ်တပ်တွင်း၌ အရေးပါသော ရာထူးများ ရရှိစေရန် အားပေးချီးမြှောက်သည့် လူအများ ပေါ်ထွက်လာမည်။ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများက နိုင်ငံရေးအာဏာ ရပြန်လျှင်လည်း အဆိုပါ လူအများသည်ပင် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်များအား ထောက်ခံအားပေးကြမည်ဖြစ်သည်။ "patrimonialism" သဘောတရား လွှမ်းမိုးခံရသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ယင်းသို့သော လူများ အများအပြား ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
အဆိုပါ သဘောတရားသည် နိုင်ငံရေးအာဏာကို မှီတွယ်ခြင်း စိတ်သဘောနှင့် ဆက်စပ်နေလေရာ နိုင်ငံရေးအာဏာကို ပြန်လည် ထိန်းညှိမည့် inherent logic of strong civil society ကို ထောက်ခံ အားပေးခြင်း မရှိ။ သို့ဖြစ်ရာ civil society အဖွဲ့အစည်းများ အများအပြား လိုအပ်သည့် political liberalization ကို နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာစေမှုများ ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။ အဆိုပါ သဘောတရား၏ လွှမ်းမိုးမှု လျော့နည်းလာသော လူ့ဘောင်သစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်မှသာ political liberalization အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ အရောက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၃) စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ
အာဏာရှင်များဘက်မှ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့် အနည်းငယ် ပေးလာခြင်း စသည်တို့တွင် နိုင်ငံစီးပွားရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်သော အခြေအနေများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းများပြီး၊ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားနေပါက အရပ်သားပြည်သူလူထုကို နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်ခွင့် အနည်းငယ် ပေး၍ စိတ်ဝင်စားမှု အာရုံပြောင်းပေးရသည်။ ယင်းသို့ မဟုတ်လျှင် စီးပွားရေး ဆုပ်ယုတ်မှု အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး စနစ် လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။
အချို့က ဆိုတတ်ကြသည်။ အာဏာရှင်များက ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ပေးပဲ အာဏာဆက်သိမ်းလျှင်လဲ ရပါလျက် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးသည်မှာ အာဏာရှင်ဘက်က သဘောထား ပျော့ပျောင်းလာခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဆိုတတ်ကြသည်။ အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ စတင်သည့် political liberalization ဖြစ်ရပ်အချို့အတွက် ဤအဆိုမှာ မှန်ကောင်းမှန်မည် ဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်ရပ်တိုင်း တွင်ကား မဟုတ်ချေ။ ခွေးတကောင်ကို အပြင်သို့ ခေါ်၍ လမ်းလျှောက်ထွက်ပါက လက်ထဲတွင် အတင်းဆုပ်ပြီး ကိုင်ထား၍ မရ။ မထင်မှတ်ချိန်တွင် လွတ်ထွက်သွားနိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်ခွင့်၊ ပြေးခွင့် အနည်းငယ်ကိုတော့ ပေးရသည်။ ကိုင်ထားသော ကြိုးကို လိုသလို အဆွဲအဆန့် လုပ်နိုင်ဖို့သာ လိုသည်။ political liberalization ဆိုသည်မှာလည်း ဤနည်းနှယ်နှယ်ပင်။ လွတ်ထွက်သွားမည်စိုး၍ ကြိုးတန်းလန်းဖြင့် လွတ်လပ်ခွင့် ပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်က အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် Sadet က တံခါးဖွင့် စီးပွားရေး မူဝါဒကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ တံခါးဖွင့် စီးပွားရေး မူဝါဒ ကျင့်သုံးချိန်တွင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အခြားသော macro-economic arrangements များကို မပြုလုပ်သောကြောင့် လက်တဆုပ်စာ လုပ်ငန်းရှင် တစုသာ ပေါ်ထွက်လာပြီး၊ တိုင်းပြည်တွင် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟနှုန်းက မတရား ထိုးတက်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် အခြေခံစားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများက တရဟော ထိုးတက်သွားပြန်ရာ နိုင်ငံနှင့် အ၀ှမ်း ဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်လာတော့သည်။ အဆိုပါ အခြေအနေများ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း မရှိစေရန် အီဂျစ်အစိုးရက အတိုက်အခံပါတီများကို ပါတီထောင်ခွင့် ပေးလိုက်သည်။ လူအများကို လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခွင့်၊ ပြောဆိုခွင့် အနည်းငယ် ပေးလိုက်သည်။
စိတ်ပညာသဘောအရ လူတယောက်၏ စိတ်ထဲတွင် ပိတ်လှောင်မွန်းကြပ်နေမှုကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ခွင့် ပေးလိုက်သည့်အခါ ထိုလူ၏ စိတ်ထဲတွင် ပေါ့ပါးသွားလေ့ရှိရာ အာဏာရှင်အစိုးရသို့ စုပြုံလာသော မကျေနပ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခွင့်ပြု လိုက်ခြင်းဖြင့် မကျေနပ်မှုများ ပေါက်ကွဲထွက်သွားပြီး ဆန့်ကျင်သည့် အဆင့်သို့ မတက်လှမ်းတော့ပဲ ပြီးသွားတတ်သည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံအပါအ၀င် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံအများစုတွင် တတိယလှိုင်း ဒီမိုကရေစီ လှိုင်းလုံးကြီးနှင့် မျောမပါပဲ အာဏာရှင်အစိုးရများ ရပ်တည်နေနိုင်သည့် အကြောင်းအချက်များတွင် ဤအချက်ကလဲ တချက် အပါအ၀င်ပင်ဖြစ်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှ နိုင်ငံများတွင် political liberalization အတွေးအခေါ် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ တက်လှမ်းခြင်း မရှိပဲ ရပ်တန့်နေခဲ့သည်မှာလဲ ကာလအတန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ political liberalization အတွေးအခေါ်သည် အာဏာရှင် အစိုးရများမှ အာဏာကို အသွင်သဏ္ဍာန်တမျိုးဖြင့် ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်စေရေးအတွက် ဆေးကောင်းတခွက်ပင် ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း ပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် အာရုံပြောင်းပေးနိုင်သည့် မျက်လှည့် ဆရာ တပါး ဟုလည်း ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် political liberalization နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့သည် လုံးဝ ဆက်စပ်ခြင်း မရှိသည်ကား မဟုတ်။ political liberalization လုပ်ချိန်နှင့် တပြိုင်နက်တည်းတွင် economic liberalization ကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ အသွင်ပြောင်းကာလ စီးပွားရေး အခြေအနေကို မှန်ကန်သော မူဝါဒများ ချမှတ်၍ ရလဒ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ Transition-induced contraction ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း ကျဆင်းခြင်းကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်မည့် မူများ ချရမည်။ supplier-buyer relationship ကို ဖရိုမရဲ မဖြစ်စေရန် ထိန်းကျောင်းပေးရမည်။
အသွင်ကူးကာလ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် အရေးကြီးသော ဧရိယာ သုံးမျိုးဖြစ်သော liberalization of internal markets, liberalization of external markets, privatization and restructuring စသည်တို့တွင် သင့်လျော်သော မူဝါဒများ ချမှတ်ရန် လိုအပ်သည်။ အသွင်ကူးကာလ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် shock therapy နှင့် gradual reform strategy တို့အနက် အချိန်ကာလနှင့် ကိုင်ညီသည့် မဟာဗျူဟာကို ရွေးချယ်နိုင်မှုကလည်း အရေးကြီးလေသည်။
စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးရွားမှုကြောင့် political liberalization စတင်လာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း၊ တက်လာသည့် အစိုးရသစ်မှ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမည့် စီးပွားရေးမူဝါဒများကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချနိုင်လျှင် liberalization နှင့် economic growth တို့အကြားတွင် positive relationship ဖြစ်လာနိုင်သည်ဖြစ်ရာ economic reform များ၏ adverse effects များကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် economic growth တို့အကြားမှ ဆက်စပ်မှုမှာ positive တခုတည်း မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုကြရန် လိုအပ်သည်။ political liberalization နှင့် economic liberalization တို့ တပြိုင်တည်း ဖြစ်မလာပါက negative marginal effects များ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါသည်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ဒီမိုကရေစီသည် နိုင်ငံရေး မသေချာမှုနှင့် ဆက်စပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရများသည် ရွေးကောက်ပွဲများဖြင့် မူဝါဒ ချမှတ်နိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းကြရသည်ဖြစ်ရာ စီးပွားရေး မူဝါဒ သက်တမ်းများသည် ရွေးကောက်ပွဲသက်တမ်းဖြင့် အချိန်မတူညီပဲ economic reform ၏ ရေတို adverse effects များ နောက်တကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ပေါ်ထွက်လာပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲသစ်တွင် နိုင်ငံရေးအရ backlash ဖြစ်မည်ကို အာဏာရပါတီများက စိုးရိမ်လေ့ရှိကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ရေတိုတွင် နှောင့်နှေးသော်လည်း ရေရှည် အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည့် မူဝါဒများကို ရှောင်ကြဉ်၍ ရေတိုအကျိုးစီးပွားကိုသာ ကြည့်တတ်ကြလေရာ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံသဘောတရားဖြစ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းကပင်လျှင် ရေရှည်စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ပြန်လည် ထိခိုက်လာသည်များလည်း ရှိတတ်ပါသည်။
အထက်ပါ အချက်များအပြင် political liberalization အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ အရောက်သွားရေးတွင် အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်မည့် ပထ၀ီဝင် နိုင်ငံရေး အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး အခြေအနေများနှင့် လူမှုရေး အခြေအနေများစွာလဲ ရှိပါသေးသည်။ Political liberalization ဆိုင်ရာ ကျမ်းတစောင် မဟုတ်၍ အကျယ်မချဲ့လိုတော့ပါ။ Political liberalization အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲ၍ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို အရောက်ချီရန် ရည်ရွယ်သူများအနေဖြင့် အဆိုပါ အခြေအနေများကို နားလည်သိရှိထားကြရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရသော် ယနေ့ လက်ရှိ ကာလသည် အတွေးအခေါ်များ အလွန် ရှုပ်ထွေးနေသည့် ကာလတခု ဟု ဆိုရပေမည်။ အာဏာရှင်များဘက်မှ political liberalization ကို အကောင်အထည် စတင်ဖော်လိုက်သည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ political liberalization ကို လက်ခံမည်လား၊ လက်မခံဘူးလား၊ အဆိုပါ အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင်သည်လား၊ မရနိုင်ဘူးလား၊ အစဉ်အဆက် ကျင့်သုံးခဲ့ကြသော အာဏာရှင်စနစ်ဖြိုချရေး အတွေးအခေါ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားမည်လား၊ မဆုပ်ကိုင်ထားဘူးလား၊ ဆုပ်ကိုင်ထားလျှင်ကော အောင်မြင်မည်လား၊ မအောင်မြင်ဖူးလား စသည်တို့ကို တွေးတော ငြင်းခုန်နေကြရုံသာမက အတွေးအခေါ် နှစ်ခုကို ရောသမမွှေထားသည့် နိုင်ငံရေးလိုလို၊ အန်ဂျီအိုလိုလို အတွေးအခေါ်သစ်များပင် ထွန်းကားလာသည့် ကာလတခုဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုးထားသည့် အတွေးအခေါ်များနှင့် အုပ်စုများကို ခွဲခြားလိုက်ပါက အုပ်စုကြီး ခြောက်ခု ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
(၁) Initial Transition အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံ၍၊ အဆိုပါ အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့် လမ်းစဉ်များကို ဖော်ဆောင်ပါက ရေတိုပန်းတိုင်အနေဖြင့် ကြားဖြတ်အစိုးရ (၀ါ) ပြည်သူ့အစိုးရ အသွင်သဏ္ဍာန် တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်ရမည်ဟု စဉ်းစားသူများ
(၂) Political Liberalization အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံ၍၊ အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ ဖွင့်ပေးလိုက်သော political space များကို အသုံးချကာ နိုင်ငံရေးစည်းဝိုင်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီး၊ တစတစ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများမှတဆင့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းမည်ဟု စဉ်းစားသူများ
(၃) Political Liberalization မှ democratic consolidation ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ initial transition မှ democratic consolidation ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ civil society မှာ အဓိကကျသဖြင့် နိုင်ငံရေးရာများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိပဲ civil society အားကောင်းလာစေရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု စဉ်းစားသူများ
(၄) ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာရင် ပြီးရော ဆိုသည့် သဘောပိုက်ကာ ဖြစ်လာသည့် အခြေအနေတွင် အာဏာ၊ ရာထူး၊ နေရာ၊ အမည်ကောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား စသည့် အကျိုးအမြတ်များအား မည်သို့ ရှာမည်နည်း ဆိုသည်ကို စဉ်းစားသူများ
(၅) Initial transition အတွေးအခေါ်ကိုလည်း အပြည့်အ၀ လက်ခံခြင်းမရှိ၊ political liberalization အတွေးအခေါ်ကိုလည်း အပြည့်အ၀ လက်ခံခြင်း မရှိသော ရောသမမွှေများ
(၆) political liberalization အတွေးအခေါ်ကို အသုံးပြု၍ အာဏာကို တတ်နိုင်သမျှ ဆွဲဆန့်ထားရန် ကြိုးပမ်းနေသော အာဏာရှင်များနှင့် အပေါင်းအပါများ
အဆိုပါ အုပ်စုခြောက်မျိုးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ကံကြမ္မာအတွက် အာဏာရှင်နှင့် အပေါင်းအပါများ နည်းတူ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အုပ်စုမှာ ရောသမမွှေများ ဖြစ်ပါသည်။ political liberalization အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံပြီး၊ political space ကို အသုံးပြုလိုသူများမှာ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို ရောက်လေမည်လားဟု စမ်းလိုသော စေတနာပါသဖြင့် ရောသမမွှေများလောက် ကြောက်ဖို့မကောင်းလှပါ။ အာဏာရူးအခွင့်အရေးသမားများမှာလဲ ၄င်းတို့ ရူးကြောင်းကို လူထုက သိနေပြီး ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော်ကံကြမ္မာအတွက် အန္တရာယ် မရှိလှပါ။
သို့ရာတွင် ရောသမမွှေများမှာကား Initial transition အတွေးအခေါ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားသူများဟု လူအများက မြင်ထားလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသူများသည် initial transition ၏ ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ထွက်ရေးကို လက်ခံခြင်းမရှိကြ။ political liberalization အတွေးအခေါ်အရ ပေါ်ထွက်လာသော political space တွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း မရှိကြ။ သို့ရာတွင် political liberalization အရ ချဲ့ထွင်လာသော public space အခွင့်အရေးကို ယူရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ယင်းသို့ ကြိုးပမ်းပြီးမှ initial transition အတွေးအခေါ်၏ ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ထွက်ရေးကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည်လားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပြန်။ civil society အားကောင်းလာရေးကိုပဲ ဦးစားပေး လုပ်တော့မည်လိုလိုကလဲ ဖြစ်လာပြန်သေးတော့သည်။
ပမာဆိုရလျှင် မြစ်ကမ်းတဘက်ဆီတွင် လမ်းလျှောက်ရင်း ဟိုဘက်ကမ်းသို့ လှေနှင့် ကူးလိုက်၊ ဒီဘက်ကမ်းသို့ လှေနှင့် ကူးလိုက် လုပ်နေသည်နှင့် တူလှသည်။ လှေရှိသူများက ကူးချည်သန်းချည် လုပ်ရန် မခက်ခဲသော်လည်း နောက်က တကောက်ကောက် လိုက်သူများမှာကား ရေထဲ ကျလိုကျ၊ မောပြီး ကမ်းပါးမှာ ငုတ်တုပ်ထိုင်သူက ထိုင်နှင့် ခရီးမတွင်ပဲ ဖြစ်နေကြရတော့သည်။ ပိုဆိုးသည်က အတွေးအခေါ် နှစ်ရပ်လုံးကို ရောသမမွှေထားကြလေရာ Initial Transition အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့် လမ်းများပေါ်တွင်လည်း ကန့်လန့်ကန့်လန့်၊ political liberalization အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့် လမ်းများပေါ်တွင်လည်း ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသဏ္ဍာန် ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်လေသည်။
အဆိုပါ အတွေးအခေါ် ရှုပ်ထွေးမှု အခြေအနေများသည် နိုင်ငံတော်အနာဂတ်ကံကြမ္မာအတွက် အန္တရာယ်ကြီးပါသည်။ မည်သည့် အတွေးအခေါ်ကို ကျင့်သုံးသင့်သည် ဆိုသည်မှာ လူတယောက်၊ အဖွဲ့အစည်းတခု၏ ကိုယ်ပိုင် ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။ လူ့သဘာဝအရ အမြင်မတူလျှင် အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုကတော့ ပေါ်ထွက်နေမည်သာ ဖြစ်သည်။ initial transitionအတွေးအခေါ် ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် political liberalization အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲကာ political space တွင်းသို့ ၀င်သွားသူများသည် အရှုံးပေး၊ အညံ့ခံသူများ ဖြစ်ပြီး၊ political liberalization အတွေးအခေါ်မှ ကြည့်လျှင် initial transition ကို လက်ခံသူများသည် compromise မလုပ်လိုသော နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ အပြန်အလှန်ရှုမြင်ပြီး၊ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲပိုင်ခွင့် ရှိသော်ငြား ထိုသို့ စွပ်စွဲရင်းဖြင့် အချိန်မကုန်ကြစေလိုပါ။ initial transition လက်ခံသူများကလဲ ပါးစပ်ဖြင့် အာနေခြင်းများကို လျှော့ချ၍ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်သဏ္ဍာန်တမျိုးမျိုး ပေါ်လာရေးကို ကြိုးပမ်းသင့်ကြပါသည်။ political liberalization လက်ခံသူများကလဲ ချဲ့ထားသည့် political space လေးတွင်းသို့ ဘယ်လိုနည်းဖြင့် ၀င်ရ၀င်ရ၊ ရအောင်ဝင်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို အပြောမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ချီတက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းသင့်ကြပေသည်။
ပန်းတိုင်မရောက်ခင် တက်မထောင်ချင်သော မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အစဉ်အလာဆိုးကြီးကို အလုပ်ဖြင့် သက်သေပြ၍ ဖျောက်ဖျက်သင့်ကြပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ initial transition က ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်လား၊ political liberalization က ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်လား ဆိုသည်မှာကား မူအရဆိုလျှင် အဖြေထွက်သော်လည်း လူအရဆိုလျှင် အဖြေမရှိပါ။ မည်သူမျှ တပ်အပ်သေချာ ပြောနိုင်မည်လည်း မဟုတ်သဖြင့် ငြင်းခုန်ရင်း အချိန်မဖြုန်းသင့်ကြတော့ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ အဖွဲ့စွဲများကို ဖယ်ရှား၍ အတွေးအခေါ် တခုကို ရွေးကြရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် အခြေအနေနှင့် လားရာကို သဘောပေါက်ပြီးမှ၊ ပန်းတိုင်ကို သိပြီးမှသာ ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ရွေးချယ်ပြီးလျှင်လည်း ရှင်းလင်းသည့် အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သော ပြတ်သားသည့် လမ်းစဉ်များကို ချမှတ်ရပါမည်။ လမ်းကြောင်းများကို လျှောက်လှမ်းရပါမည်။ အတွေးအခေါ် ရှုပ်ထွေးနေလျှင် လမ်းစဉ်များေ၀၀ါးနေတတ်သဖြင့် ပန်းတိုင်နှင့်လဲ အစဉ်အမြဲ ဝေးနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည်။
ခင်မမမျိုး (၂၇၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀)
(စာကြွင်း- ဤစာကို ရေးသားရာတွင် ကော်ဖီနှင့် လက်ဖရည် ဘယ်အရာက ပိုကောင်းသလဲ ဆိုသော မေးခွန်းသဏ္ဍာန်ကို ဖြေရာ၌ ကော်ဖီ၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးနှင့် လက်ဖရည်၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး နှစ်မျိုးစလုံးကို ယှဉ်တွဲဖြေဆိုသော ရှုထောင့် မှ ရေးသားထားသည်။ ကော်ဖီနှင့် လက်ဖရည် ဘယ်အရာကို ပိုကြိုက်သလဲ ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မေးခွန်းသဏ္ဍာန်ကို စာဖတ်သူတဦးဦးမှ မေးလာပါလျှင်ကား initial transition နှင့် political liberalization အတွေးအခေါ် နှစ်ရပ်တွင် စာရေးသူ ယနေ့အချိန်အထိ လက်ခံကျင့်သုံးနေသော အတွေးအခေါ်မှာ initial transition အတွေးအခေါ် ဖြစ်ပြီး၊ လမ်းစဉ်မှာ လူထုတိုက်ပွဲလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ရေတိုပန်းတိုင်မှာ အတိုက်အခံများက ဦးဆောင်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ (သို့မဟုတ်) လူထုတိုက်ပွဲတွင် ပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းလာသော မျိုးချစ် တပ်မှူးများနှင့် အတိုက်အခံများ ပူးတွဲဖွဲ့စည်းသော ကြားဖြတ်အစိုးရဖြစ်ပါသည်)
ABDELNASSER, Gamal. (2004): “Egypt: Succession Politics,” Volker Perthes (ed.), Arab Elites: Negotiating the Politics of Change, (ed.), Boulder: Lynne Rienner Publishers.
Alesina, Alberto, and Allan Drazen (1991), “Why Are Stabilizations Delayed?” American Economic Review 81 (5), 1170-1188.
Anderson, Lisa. (1999). Transitions to Democracy. New York: Columbia University Press.
Avant, Deborah. (1994) Political Institutions and Military Change: Lessons from Peripheral Wars. Ithaca, NY: Cornell University Press
Brownlee, Jason. (2007). Authoritarianism in an Age of Democratization. New York, NY:
Barro, Robert J. (1996), “Democracy and Growth,” Journal of Economic Growth 1 (1), 1-27.
Campos, Nauro (1999), Back to the Future: The Growth Prospects of Transition Economies
Reconsidered, William Davidson Institute Working Paper No. 229, Ann Arbor, MI.
Denizer, Cevdet (1997), Stabilization, Adjustment and Growth Prospects in Transition Economies, Policy Research Working Paper No. 1855, The World Bank, Washington, DC.
CHASE, Robert S.; HILL, Emily B. ve KENNEDY, Paul (1996): “Pivotal States and U.S. Strategy,” Foreign Affairs, 75: 33-51.
Finer, Samuel. (1962). The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics. New York, NY: Penguin Books.
Fitch, J. Samuel. (1998). The Armed Forces and Democracy in Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
GALA, Amin A. (1995): Egypt's Economic Predicament: A Study in the Interaction of External Pressure, Political Folly and Social Tension in Egypt. 1960-1990. New York, E. J. Brill.
Heybey, Berta, and Peter Murrel (1999), “The Relationship between Economic Growth and the Speed of Liberalization During Transition,” Journal of Policy Reform3(2), 121-137.
Halpern, Manfred. 1963. The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa. Princeton: Princeton University Press.
KRAMER, Gudrun (1996): “The Integration of the Integrists,” Ghassan Salame (ed.), Democracy without Democrats, London, New York, I.B. Tauris.
LINZ, Juan J. ve STEPAN, Alfred (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
Lipset, S.M. (1959), “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,” American Political Science Review 53, 69-105.
Monshipouri, Mahmood. (1995) Democratization, Liberalization and Human Rights in the Third World. London: Lynne Rienner Publishers
Parry, Geraint and Moran, Micheal, eds. (1994) Democracy and Democratization. New York: Routledge
Przeworski, Adam, and Fernando Limongi (1993), “Political Regimes and Economic Growth,” Journal of Economic Perspectives7(3), 51-69.
Rodrik, Dani (1995), “The Dynamics of Political Support for Reforms in Economies in Transition,” Journal of the Japanese and International Economies9(4), 403-425.
Shleifer, Andrei (1998), “Government in Transition,” European Economic Review 41 (3-5),
Wolff, Holger C. (1999), Transition Strategies: Choices and Outcomes, Princeton Studies in International Finance No. 85 (June), Department of Economics, Princeton University, Princeton, NJ.
စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး - ဒို့အရေး
ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး - ဒို့အရေး
ပြည်သူ့အစိုးရ ပေါ်ပေါက်ရေး - ဒို့အရေး
လူထုလှုပ်ရှားမှုများကို - ၀န်းရံကြ
အာဏာရှင်အလံကို - ဖြုတ်ချကြ
ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ - အောင်ရမည်။
အခုတလော ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားဖူးတဲ့ ကျားကစားပွဲလေးတွေကို သတိသွားရမိနေတတ်ပါတယ်။ ဖိုးဖိုးက အားရင် ကျားကွက်လေးတွေ ရွှေ့ပြီး တယောက်တည်း ကစားလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မကလဲ ကလေးသဘာဝ ဖိုးဖိုး လုပ်တာဆို အကုန် လိုက်လုပ်ချင်တတ်တယ်။ သတင်းစာဖတ်ရင်လဲ လိုက်ဖတ်ချင်တာပဲ။ ရေဒီယိုနားထောင်လဲ လိုက်နားထောင်တာပဲ။ လူကြီးတွေနဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင်စကားပြောရင်လဲ ၀င်ထိုင် နားထောင်ပြီး အရိပ်လို တကောက်ကောက် လိုက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျားကွက်လေးတွေ ရွှေ့နေတာကိုလဲ စိတ်ဝင်စားမိပြန်ရော။
ဒီလိုနဲ့ တနေ့တော့ ကျွန်မ ကျောင်းစနေစ အရွယ်လောက်မှာ ဖိုးဖိုးက ကျားကစားနည်း စသင်ပေးပါတယ်။ ကျွန်မကလဲ ကြိုးစားပြီး သင်ယူပါတယ်။ မတောက်တခေါက်လေး တတ်လာတော့ ဖွားဖွားကို သွားစိန်ခေါ်ပြီး ကစားတယ်။ နိုင်သွားတော့ သိပ်ပျော်တာပဲ။ ဖွားဖွားကမှ သေချာ မကစားတတ်တာကိုးနော်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အဟုတ်ကြီး ထင်ပြီး ဖိုးဖိုးကို စိန်ခေါ်တာပေါ့။ ဖိုးဖိုးနဲ့ ပွဲပေါင်းများစွာ ကစားဖြစ်တယ်။ တခါမှ မနိုင်ပါဘူး။ ကြာတော့ စိတ်တိုလာရော။ စိတ်မရှည် သိပ်ဖြစ်တာပဲ။ ဒီတော့ ပြောလိုက်တယ်။ ဖိုးဖိုးက ကစားပွဲကို ညစ်တယ်လို့။ ဒီလိုပြောတော့ ဖိုးဖိုးက ရီတယ်။ 'မြေးလေးက ပွဲကစားတာ နိုင်ချင်စိတ်များပြီး လောနေတာကိုး။ ကျားကစားတယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ တကွက်ချင်းကို စဉ်းစဉ်းစားစားရွှေ့ရတယ်။ မျက်တောင်တခတ်ထက် မျက်စိ တဆုံးကို ကြည့်တတ်ရတယ်' လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဖိုးဖိုး မဆုံးခင် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာတော့ ကျွန်မ နိုင်ပါတယ်။ ဖိုးဖိုးက တမင် အရှုံးပေးသွားတာပါ။
အရွယ်ရောက်လာတော့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု အသစ်တွေကလဲ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျားကစားပွဲလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ ကျွန်မဟာ chess ထိုးတာကို စိတ်ဝင်စားလာလေ မလားလို့ နီးစပ်သူတွေက ထင်ကြပေမယ့် ကျွန်မတကယ် စိတ်ဝင်စားလာတာ ကတော့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာရေးရာတွေကိုပါ။ စစ်ပွဲတွေမှာ တဘက်နဲ့ တဘက် ဘယ်လို အနိုင်ယူသွားကြသလဲ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံအချင်းချင်း ဘယ်လို game တွေ အပြန်အလှန် ကစားကြသလဲ။ နိုင်ငံငယ်လေးတွေကို အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေက ဘယ်လို ကြိုးဆွဲလေ့ရှိကြသလဲ။ ၀ါဒရေးရာ အားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဘယ်လို ကစားခဲ့ကြသလဲ။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် နေချိန်မှာ သူတို့တွေ အမှန်တကယ် နောက်ကွယ်မှာ ကစားနေကြတဲ့ ဂိမ်းတွေက ဘာတွေ ဖြစ်နေမလဲ။ တော်လှန်ရေးနဲ့ ပဋိပက္ခတွေမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ multi-players တွေအကြားမှာ ဘယ်လို အတွေးအခေါ်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ဂိမ်းတွေ ကစားနေကြသလဲ။ စတာတွေကို အလွန်ပဲ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ လေ့လာနေရေး တနေ့တော့ လန်ဒန်က ကျွန်မသူငယ်ချင်း အိမ်မှာ ကျားကစားပွဲလေး တခုနဲ့ သွားတိုးပါတယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကတဘက်၊ သူငယ်ချင်းရဲ့ မိတ်ဆွေက တဘက် အပျင်းပြေ ကျားကစားနေကြတာပါ။ သူငယ်ချင်းက လာထိုင်ကြည့်ဖို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့က ကောဇောပေါ်မှာ ထိုင်ကစားနေပြီး၊ ကျွန်မက ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေတာဆိုတော့ ကျားကွက်တွေကို အတိုင်းသား မြင်နေရပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက ရွှေ့နေတဲ့ ကျားကွက်တွေကိုပါ။ သူက အရမ်းလောတာပဲ။ ကျွန်မ ဖိုးဖိုးနဲ့ ကစားတုန်းက နိုင်ချင်စိတ်များပြီး လောနေသလိုမျိုးပါ။ အနာခံပြီး ဇွတ်တိုးနေတာပဲ။ ဒီတပွဲတော့ နင့်ကို အနိုင်ကစားမယ်ဆိုပြီး ပါးစပ်ကလဲ ခဏခဏ ပြောနေသေးတယ်။ နောက်တော့ ရှုံးသွားရော။ ဒီလိုနဲ့ အဲလိုပွဲတွေ များလာတော့ ကျွန်မ မနေနိုင်တော့ဘူး။
'မီးဖိုထဲ ခဏ လိုက်ခဲ့စမ်းပါ။ မုန့်ကျွေး'ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းကို မီးဖိုထဲ လက်တို့ ခေါ်သွားရတော့တယ်။ အထဲရောက်တော့ ပြောတယ်။
'နင်သိပ်လောနေပြီ။ နိုင်ချင်စိတ်များပြီး ဒီပွဲတော့ နိုင်မယ်လို့ ခဏခဏ ပြောနေတာက ကြာလေ၊ ကြာလေ နင့်ကို ထိခိုက်လာနေတယ်။ auto-suggestion လုပ်တယ်ဆိုတာက ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက် တွေမှာ လုပ်ဖို့ပဲ လိုအပ်တာ။ ဒီလို ဂိမ်းတွေမှာ လုပ်နေလို့ မရဘူး။ ပြင်ဆင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ တဘက်ရဲ့ အရည်အချင်း ဆိုတာတွေကိုလဲ ထည့်ပြီး စဉ်းစားရသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ဖြစ်နိုင်ချေကို တွက်ရတယ်။ အဲလို မဟုတ်ပဲ နိုင်မယ်ဆိုတာ ခဏခဏ ပြောပြီး လုပ်နေတော့ နင့်ဘာသာနင် လောနေအောင် တွန်းနေသလို ဖြစ်လာတယ်။ ပုံမှန် စဉ်းစားဥာဏ်တွေ ပျောက်ကုန်တယ်။ နိုင်ချင်စိတ်က များလာလေလေ၊ အမှားတွေ လုပ်မိလေလေ။ ရှုံးလာလေလေပဲ။ ကြာတော့ နိုင်ရမယ်လို့ ပါးစပ်က ပြောနေပေမယ့် နင့်ဘာသာနင်လဲ ယုံကြည်ချက် နည်းလာတယ်။ ဘေးက ကြည့်နေတဲ့ လူတွေကလဲ ဒါတွေကို မသိဘူး မထင်နဲ့။ နင်ဘယ်လောက်ပြောနေနေ နင်ပြောတာကို ဘေးက လူတွေကလဲ မယုံတော့ဘူး။ နင့်ဘာသာနင်လဲ မသေချာတော့ဘူး ဖြစ်လာနေတယ်။ ကျားကစား တယ်ဆိုတာမျက်စိတဆုံးကြည့်ရတယ်ဟ။ မျက်တောင်တခတ်တည်းကြည့်ရင် အမှားပါ တတ်တယ်'
လူရင်းတွေမို့ ကျွန်မကလဲ အားမနာတမ်းပဲ ပြောပါတယ်။ သူကလဲ အားမနာတမ်း ပြန်ပြီး ပြောပါတယ်။
'သူ့ကိုက တော်လွန်းတာလဲ ပါပါတယ်ဟာ။ မယုံရင်နင်ကိုယ်တိုင် ၀င်ကစားကြည့်ပါလား။ နင်နိုင်ရင် ချိုင်းနားတောင်းမှာ ဘဲကင်လိုက်ကျွေးမယ်။ ဘေးကထိုင်ပြီး ပြောမနေနဲ့' တဲ့။
'နင်တို့က မိတ်ဆွေတွေလေ။ အပျင်းပြေကစားနေကြတာ။ ငါနဲ့ သူနဲ့က ခုမှ မြင်ဖူးတာ။ ငါကလဲ နင်တို့ကစားပွဲမှာ နင့်နေရာက ၀င်ကစားဖို့ အဆင်မပြေနိုင်သလို၊ သူ့ဘက်ကလဲ နင်နဲ့ အပျော်ကစားနေတာကို သူစိမ်းတယောက်က ၀င်ပြီး အနိုင်အရှုံးစိတ်နဲ့ ၀င်ကစားတာကို ကြည်ဖြူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကို နင်လို့ အသိအမှတ်ပြုမှာလဲ မဟုတ်ဘူး။ နင်တို့နှစ်ယောက်လုံးမှာ တယောက်ကိုတယောက် အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ role တွေ ရှိတယ်လေဟာ။ အဲဒါကို ငါဝင်စီးလို့ မရဘူး။ ဒီလိုပြောလို့ ငါက သူ့ကို ကြောက်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ တချိန်မှာ ငါနဲ့ သူနဲ့ တယောက်ကိုတယောက် အသိအမှတ်ပြုမိပြီး ကစားပွဲတော့ ရှိချင်ရှိလာဦးမှာပေါ့ဟာ။ အဲလိုဆိုရင်တော့ ပ၀ါ မကူစတမ်းပေါ့။ ခုတော့ ငါမပါချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နင်က ငါ့သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေတော့ ငါဘက်လိုက်နေမိတယ်။ နင့်ကို နိုင်စေချင်မိတယ်လေ။ တခါ ငါကလဲ ကျားကစားနည်းတွေ၊ ကျားကွက်ရွှေ့နည်းတွေကို မသိရင်တော့လဲ တမျိုးပေါ့ဟာ။ သိတော့လဲ မချင့်မရဲဖြစ်မိ၊ ပြောဆိုမိတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းဘက်က ဘက်လိုက်လိုစိတ်၊ ကစားနည်းကို သိနေတဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ ငါနင့်ကို သတိပေးတာပါ။ နင့်ကို အသုံးမကျဘူးလို့ နှိမ်နေတာမဟုတ်သလို၊ ငါသိတယ်၊ ငါတော်တယ်လို့ ပြောနေတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ နင့်ဘက်ကသာ ဘက်မလိုက်ဘူးဆိုရင်လဲ ငါနဲ့ အနေသာကြီးနော်'
ကျွန်မသေချာရှင်းပြလိုက်တော့ ဘေးထိုင်ဘုပြောလုပ်နေတယ်ထင်ပြီး ပြန်ရန်တွေ့တဲ့ သူငယ်ချင်းက ငြိမ်သွားပါတယ်။ သူ့ထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာလေးကို ဖြီးပြတယ်။
'အင်း။ ဒီလိုဆိုရင်တော့လဲ နင်ဝင်မကစားပေမယ့် ငါ့ကို အကြံကောင်းပေးတဲ့အတွက် ဘဲကင်လိုက်ကျွေးပါမယ်" တဲ့။
အဲဒီနေ့က ဆက်လဲ မကစား ဖြစ်တော့ပါ။
သူ့မိတ်ဆွေကို နိုင်ချင်ဇောနဲ့ ရှုံးတာပါလို့ ပြောလိုက်ပြီး ပွဲရပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အားလုံးတူတူ ချိုင်းနားတောင်းကို သွားဖို့ အကြံပြုပါတော့တယ်။
အဲဒီနေ့ညက ဘဲကင်ကလဲ စားလို့ ကောင်းလိုက်ပါဘိ။
နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မကလဲ တခြားမြို့ငယ်လေး တခုကို အလုပ်တာဝန်နဲ့ ပြောင်းသွားပြီး၊ သူကတော့ သူ့မိဘတွေရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို ပြန်လုပ်ပါတယ်။ ဝေးလံတဲ့ နိုင်ငံနှစ်ခုမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေကြရင်း တနေ့တော့ သူနဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရပါတယ်။
'ဟဲ့။ နင်ပြောတဲ့ မျက်စိတဆုံးကြည့်ရမယ် ဆိုတဲ့ စကားက အဖိုးတန်တယ် သိလား'
'ငါပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဟာ။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ စကားကို ငါ့အဖိုးက တခါ ပြန်ပြီး ငါ့ကို ပြောခဲ့တာပါ'
'ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာ။ ကြားဖူးသလိုရှိပေမယ့် နင်ပြောမှ ငါပြန်သတိထားမိတာ။ နင့်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်'
'ဘာလဲ။ နင်ကျားကစားတာ နိုင်လို့လား'
'မဟုတ်ဘူးဟေ့။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အောင်မြင်လို့ အဖိုးတန်တယ် ပြောတာ။ စီးပွားရေးမှာ ပြိုင်ဘက်တွေပေါ်လာရင် ငါတော့ ကျားကစားဘက်လိုပဲ သဘောထားလိုက်တယ်။ မျက်တောင် တခတ်ကို မကြည့်ပဲ မျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီး ဘယ်လို ဒေါက်ဖြုတ်ရမလဲ ဆိုတာ သေချာ တွေးတယ်။ နိုင်ချင်စိတ်ကို မလောပဲ သွေးအေးအေးနဲ့ အနိုင်ပိုင်းနိုင်မယ့် အချိန်ကို စောင့်ကြည့်တယ်။ ခု ငါတော်တော်အောင်မြင်နေပြီဟ။ နင်ရှယ်ယာ ထည့်မလား။ ပြန်လာမလား။ ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး စီးပွားရေး ကျားကွက်တွေ ရွှေ့ကြတာပေါ့။
ကျွန်မလဲ တအံ့တသြနဲ့ ဘုရားတမိပါရဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးက စီးပွားရေးမှာ အောင်မြင်နေတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းလေးရယ်- သတိရလိုက်တာ။
ခင်မမမျိုး (၂၀၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀)
မန္တလေးနှင့် အနီးတ၀ိုက်မြို့နယ်များတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နေပါသည်။ မိုးဆက်လက် ရွာသွန်းပြီး ဆည်များ ကျိုးပေါက်မှုရှိလာပါက သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုမှာ ပိုမို ဆိုးရွားလာနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။
မန္တလေး မြို့အတွင်းတွင်ပင် လူအများ သေကြေပျက်စီးခြင်းနှင့် အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ကာ နီးစပ်ရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ဘုရားကျောင်းကန်နှင့် ၀ိုင်အမ်စီအေ စသည့်နေရာများတွင် ခေတ္တခိုလှုံနေထိုင်နေကြရပါသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မြန်မာပြည်သူများမှ လူမှုရေး အသိ၊ မိသားစု စိတ်ဓာတ်တို့ဖြင့် တနိုင်တပိုင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ခင်မမမျိုး (၁၂၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀)
တော်လှန်ရေးနှင့် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း (အပိုင်း-၁)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ စက်မှုနိုင်ငံများနဲ့ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း (Modernization) ဆိုတာကို ယေဘုယျအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအား မြင့်မားလာခြင်းမှတဆင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာခြင်းလို့ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အချို့ကတော့ အောင်မြင်မှု၊ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိမှု စတာတွေကို လူမှုစံနှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်လာတဲ့ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အချို့ကလဲ ရိုးရှင်းတဲ့ အလုပ်ခွဲဝေမှုရှိနေတဲ့ လူအစုအဝေး (community) အဆင့်ကနေ အပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုနေတဲ့ အသင်းအဖွဲ့ (association) သို့ ပြောင်းလဲခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ လူမှုဗေဒပညာရှင် (sociologists) များကလဲ ခေတ်မှီခြင်း (modern) နဲ့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအတိုင်းကျင့်သုံးခြင်း (traditional) တို့အကြားက ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို လေ့လာနေကြဆဲပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ စက်မှုနိုင်ငံများရဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု သဏ္ဍာန်တွေကို ပညာရှင်များစွာက ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ လေ့လာတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေဟာ ဒီလိုအခြေအနေကို ရောက်ရှိလာဖို့အတွက် ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြရသလဲ။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေမှာ တော်လှန်ရေး (revolution) ဆိုတာ အစိတ်အပိုင်းတခုအနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့သလား ဆိုတာတွေကို ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တွေးခေါ်ပညာရှင်များက ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကို ရှုထောင့်လေးမျိုးကနေ ခွဲခြားလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ Ethnocentric view ကို အခြေခံတဲ့ ပညာရှင်များက လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုသဏ္ဍာန်ကို အသေးစိတ်လေ့လာပြီး၊ ဒီသဏ္ဍာန်ပေါ်မှာ မူတည်တဲ့ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Multilinear view ကို အခြေခံတဲ့ ပညာရှင်များကတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုသဏ္ဍာန်တွေကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ထပ်ရှုထောင့် နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Objective Idealist view နဲ့ Technological determinist view တွေကတော့ ဂျာမန်တွေးခေါ်ပညာရှင် Hegel ရဲ့ အတွေးအခေါ်များကနေ မြစ်ဖျားခံဆင်းသက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုလဲ တွေးခေါ်ပညာရှင်များက ရှုထောင့် သုံးမျိုးခွဲပြီး လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုရေးရာရှုထောင့် (Cultural Approach) က ကြည့်မယ်ဆိုရင် တော်လှန်ရေးဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုစနစ် (value system) ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေမှာ တွေးခေါ်ပညာရှင် Thomas Khun ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို လူအများက ရှုမြင်တဲ့ သဘောတရားရေးရာ framework ပြောင်းလဲမှု (paradigm shift) လဲ ပါဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒရှုထောင့် (Political - economic approach) ကကြည့်မယ်ဆိုရင် တော်လှန်ရေးဆိုတာ Mode of production ကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်မှု တွေအပေါ် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စေခြင်းဖြင့် အုပ်စိုးသူ လူတန်းစားသဘောသဘာဝကို ပြောင်းလဲစေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျဉ်းမြောင်းသော နိုင်ငံရေးရှုထောင့် (Narrowly political approach) ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တော်လှန်ရေးဆိုတာ အာဏာရှင်ကို ဖြိုချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အချို့တွေးခေါ် ပညာရှင်များကတော့ ဒီအမျိုးအစားများကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဆက်စပ်တွေးခေါ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ Karl Marx က တော်လှန်ရေးဆိုတာကို နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒရှုထောင့်နဲ့ ကျဉ်းမြောင်းသော နိုင်ငံရေးရှုထောင့် နှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ လူမှုဗေဒပညာရှင် Max Weber ကတော့ တော်လှန်ရေးဆိုတာကို နိုင်ငံရေး ဘောဂဗေဒရှုထောင့်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရေးရာရှုထောင့် နှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ပြီး အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ လူမှုဗေဒ ပညာရှင် W.F. Wertheim ကတော့ တော်လှန်ရေးဆိုတာကို ရှုထောင့် သုံးမျိုးလုံး ပေါင်းစပ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ အခြားတဖက်မှာလဲ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးခေါ်ပညာရှင် Edmund Burke က ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ခြင်း ဆိုတာကို တိုင်းပြည်ရဲ့ အစဉ်အလာဓလေ့ထုံးစံ ဘောင်အတွင်းကနေပဲ ရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒဿနိကဗေဒ ပညာရှင်များကတော့ သူ့ကို relativist တယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီး ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်လေးမျိုးနဲ့ တော်လှန်ရေးတို့အကြားက ဆက်နွယ်မှုတွေကို ရေးသားတင်ပြပါမယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားက လူမှုရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ် အများစုဟာ ethnocentric view (လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုသဏ္ဍာန်ကို လေ့လာ၍ သွင်ပြင်လက္ခဏာများအား ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း) ပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ civilized ဖြစ်တဲ့ လူတွေနဲ့ Barbarians ဆိုပြီး လူနှစ်မျိုးနှစ်စား ကွဲပြားနေတဲ့အနက် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလူတွေက အောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ ရိုမင်အင်ပါယာကတော့ barbarians တွေကို ရိုမင်နိုင်ငံသားတွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ရိုမင်ဥပဒေအပေါ် တည်မှီထားတဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းတွေအပေါ်မှာ မူတည်ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်သူတွေ လက်ခံလာအောင် ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ Pax-Romana အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ဆောင်လာတဲ့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တစုံတရာ ရှိခဲ့တယ်လို့တော့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လူမှုတော်လှန်ရေး (social revolution) တော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ တော်လှန်ရေးဆိုတာကို အရစ်စ်တိုတယ်ရဲ့ sense of statis အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Rome မြို့တော်က ဗဟိုအစိုးရဟာ အကြိမ်ကြိမ် ဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အခြားကမ္ဘာတဘက်မှာလဲ Han Empire ဟာ ရိုမင်အင်ပါယာနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ ယုံကြည်မှု၊ ရှုထောင့်တွေနဲ့ ကြီးထွားခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပနဲ့ တရုတ်ပြည်နှစ်ခုစလုံးမှာလဲ ယဉ်ကျေးမှုစိမ့်ဝင်ခြင်း (cultural diffusion) ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပတခွင်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ ရိုမင် တန်ဖိုးတွေ ပျံ့နှံ့ခဲ့သလို Islamic culture ထဲက တန်ဖိုးများ (ဥပမာ- သင်္ချာဘာသာရပ်) တွေလဲ ပျံ့နှံ့စိမ့်ဝင်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ကွန်ဖြူးရှပ်တန်ဖိုးတွေ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပနဲ့ တရုတ်ပြည် နှစ်နေရာစလုံးမှာ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလဲ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဆယ့်ခုနစ်ရာစု ကာလမှာတော့ ဥရောပတခွင်မှာ အခြေခံပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီကို political actor အဖြစ် ပြောင်းလဲ ရှုမြင်လာမှုတွေဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘောတရားအသစ်တွေကို မွေးဖွားလာစေခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ပညာရှင် အရစ္စတိုတယ်က အခြေခံနိုင်ငံရေးယူနစ်ဟာ politically-determined citizen ဖြစ်ပြီး၊ pre-social individual တွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ရှေးဦးကာလ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်များက pre-social ဆိုတာကို လူသားဝိညာဉ်လို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆယ့်ခုနစ်ရာစုခေတ်ကာလရောက်ချိန်အထိ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ လူသားတဦးချင်းစီရဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို သိမြင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြသေးပါဘူး။ ဆယ့်ခုနစ်ရာစုကာလတွေမှာကျတော့ လူတဦးချင်းစီကို political actor အဖြစ် ရှုမြင်လာခြင်းနဲ့အတူ နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်တွေကိုလဲ ဖော်ထုတ်ပြဌာန်းလာကြပါတော့တယ်။ ဒီလိုအမြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရသလဲဆိုတာ ပညာရှင်များက တိတိကျကျ မပြောနိုင်ကြပေမယ့်၊ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေဟာ တော်လှန်ရေးရဲ့ အသီးအပွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အများစုက လက်ခံထားကြပါတယ်။
Marxists များက ဒါဟာ ရှေးဦးအရင်းရှင်တော်လှန်ရေးရဲ့ အသီးအပွင့်လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ပရိုတက်စတင့်ဘာသာတရားကို ကျင့်ကြံလိုက်နာခြင်းဖြင့် ကနဦး capitalist accumulation အတွက် လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ investment maximization လုပ်သလို ဖြစ်သွားတယ်လို့ သူတို့က မြင်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ individualism ဟာ လူတဦးချင်းစီကို ချည်နှောင်နေတဲ့ မျိုးနွယ်စုပတ်သက်မှုတွေကို ဖယ်ရှားပြီး transferable labour force ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Weberian tradition ကို လိုက်နာတဲ့ ပညာရှင်များကတော့ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး (cultural revolution) နဲ့ အရင်းရှင်တော်လှန်ရေး (၀ါ) နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ တော်လှန်ရေး (political-economic revolution) တော်လှန်ရေးနှစ်ရပ် တပြိုင်တည်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက် ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများကတော့ ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေဟာ ဥရောပက တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ နိုင်ငံကြီးအချို့ကိုပဲ အခြေခံပြီး ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ethnocentric view ကနေ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။
ပညာရှင်အချို့ကလဲ ကျဉ်းမြောင်းသော နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကနေပြီး ဆယ့်ခုနစ်ရာစုကာလ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၆၈၈ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးဟာ ကိုယ်စားပြုမှုနဲ့ စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ကို ပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးတော်လှန်ရေးတရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစကနဦးပိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေနဲ့ပဲ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံရေးရာတခုလို့ မှတ်ယူထားခဲ့ကြပေမယ့် ရာစုကာလ တခုကို ဖြတ်သန်းပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကမ္ဘာအ၀ှမ်းက နိုင်ငံတွေ စတင် လက်ခံကျင့်သုံးလာကြတဲ့ စနစ်တခု ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ပြင်သစ်တွေးခေါ်ပညာရှင် Montesquieu ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အာဏာချိန်ခွင်လျှာညှိရေး 'balance of powers' (အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ ဥပဒေပြုအာဏာ၊ တရားစီရင်ရေးအာဏာ သုံးရပ်) သဘောတရားဟာ အဲဒီခေတ်ကာလက အင်္ဂလန်နိုင်ငံရေး ကို တည်မှီပြီး ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသူအချို့ကတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရေးကို ဖော်ညွန်းနိုင်တဲ့ တိကျသော ပြယုဂ်မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Montesquieu အနေနဲ့ သမိုင်းကြောင်း ရှင်းပြချက်မဟုတ်တဲ့ ideal type- political model တခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့တော့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၅၀၊ ၁၉၆၀ ကာလတွေမှာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေက နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု (political development) ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ Montesquieu ရဲ့ သဘောတရားတွေကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို နိုင်ငံတခုရဲ့ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသဏ္ဍာန်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး political model တွေ တည်ဆောက်မှုတွေကို ပညာရှင်အများအပြားက လုပ်လေ့ရှိတတ်ပေမယ့် ethnocentric approach နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ၁၆၈၈ အင်္ဂလိပ်တော်လှန်ရေးကို အကြောင်းပြုပြီး၊ ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့ political model အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကို ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လမ်းကြောင်းတခုအဖြစ် ယူဆသူများ ရှိကြပါတယ်။ အခြားတဘက်မှာလဲ ဆိုဗီယက်ယူနီယံက ဘော်ရှီဗစ်တော်လှန်ရေးကို အကြောင်းပြုပြီး၊ ဒီတော်လှန်ရေးနဲ့သဏ္ဍာန်တူတဲ့ political upheaval အတိုင်း ပြုလုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ယူဆသူများလဲ ရှိလာပါတယ်။ Whig tradition ကို လိုက်နာသူများက ဗြိတိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေကို တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြသလို၊ ဒီအစဉ်အလာရဲ့ American version နောက်မှာလဲ စစ်ရေးအကြံပေးတွေ၊ ဒေါ်လာတွေ ပါလာခဲ့ပါတော့တယ်။ ၁၉၆၀ ကာလတွေမှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ရုရှားက အိန္ဒိယအတွက် ချမှတ်ပေးဖို့ ကြံရွယ်ခဲ့တဲ့ 'non-capitalist path to development' လမ်းကြောင်းတွေမှာတော့ Multi-linear view ကို သုံးစွဲလာတယ်လို့ ပညာရှင်များက ထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၁၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀)